Mogadishu Journal » 2018 » May » 19
Mjournal :-Mas’uuliyiin ka tirsan ciidamada Booliska Puntland ayaa ku dhaawacmay degaanka Daarusalaam ee gobolka Mudug kadib markii rasaas ay iswaydaarsadeen dad khamri ka ganacsada. Taliyihii Saldhiga Degaanka Daarusalaam ee degmada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa ka mid ahaa...
Mjournal :-Xubnaha Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka doodaya laba qodob oo kala ah xiisada colaadeed ee ka taagan deegaanka Tukeraq ee gobolka Sool iyo jadwalka Golaha ay ku shaqeyn doonaan inta lagu guda jiro bishaan Barakeysan ee Ramadaan....
Mjournal :-Duqa magaalada Sheffield ee dalka Britain, ayaa waxaa loo doortay Majid Majid, oo ka soo jeeda Soomaaliya. Majid, oo 28 jir ah, ayaa ku dhashay magaalada Burco, waxaana magaaladaasi Sheffield ay qoyskiisa ku tageen qaxootinimo, isagoo shan sano jir ah, kadib markii ay...
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo markale ka hadlaayay dagaalka degaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegay in maamulkiisa aysan duulaan ku aheyn Magaalada Garowe ee Caasimadda Puntland. Madaxweynaha waxaa uu sheegay in Somaliland ay dooneyso in nabad...
Mjournal :-Magaalada Muqdisho ayaa xalay waxaa ka dhacay weeraro ay waxyeelo kasoo gaartay Askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Kooxo hubeysan ayaa xalay degmada Shibis waxa ay ku dileen Askari ka tirsanaa ciidamada Booliska Soomaaliyeed, waxaana la sheegay dilka ka dib...
Mjournal : -Wararka naga soo gaaraya Magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in Magaaladaasi xalay ay kusoo rogmadeen daadad xooggan oo sameyn ku yeeshay dadka kunool Magaalada. Daadadkaan ayaa ka dhashay roobab dabeylo wata oo saacaddihii lasoo dhaafay ...